Iavoloha : nirarakompana ny fanesorana tompon’andraikitra | NewsMada
Iavoloha : nirarakompana ny fanesorana tompon’andraikitra
Par Reflets sur 02/01/2016
Nivoitra tamin’ny filankevitry ny minisitra ny 30 desambra teo, teny Iavoloha, ny fanesorana tale jeneraly maromaro. Teo koa anefa ny fampiakarana galona ireo miaramila…
Tsy afa-bela ao anatin’izany ny tale jenerelin’ny ala, ao amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, Andriamananoro Fidy José. Tombanana ho anisan’ny antony nanesorana azy ny « Raharaha andramena » 12 kaontenera sarona tany amin’ny seranan-tsambon’i Toliara herinandro vitsy lasa teo. Niaraka nesorina taminy koa ny tale iray eo anivon’ny ala, Rabenasolo.
Nailika amin’ny toerany koa ny talen’ny TVM, Rasata Lantomalala. Tsy mazava ny anton’ny fanalana azy io nefa mbola nitafa tamin’ny filoha nasionalin’ny HVM, Rakotovao Rivo, ny tenany tao amin’ny fahitalavi-panjakana, andro iray nialoha ny fanapahan-kevitry ny filankevitry ny minisitra.
Niakatra ny galon’ny Praiminisitra Ravelonarivo
Manampy ireo ny nanesorana ny tale jeneralin’ny Sekolim-pirenena ho an’ny fitantanan-draharaham-panjakana (Enam), sy ny tale iray eo anivon’ny minisiteran’ny Asa.
Ankoatra izany, voailika koa ny tale teknika eo anivon’ny fiadidiana ny hetra.
Etsy ankilany, fotoana fampiakarana galona ny eo anivon’ny Foloalindahy ny faran’ny taona tahaka izao, miainga eo anivon’ny filankevitry ny minisitra. Anisan’ny nahazo ny galona, « général de division aérienne » ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean raha « général de brigade aérienne » ny tenany teo aloha.
Eo koa ny fanendrena ny lehiben’ny Etamazaoro eo anivon’ny fikaomandiana ny hery ho an’ny fampandrosoana sy ny ao amin’ny tafika an’habakabaka.